गगन थापा नै भन्छन्, ‘कांग्रेसका मतदाता सयमा अब ३० मात्रै बाँकी छन्’ - Everest Dainik - News from Nepal
गगन थापा नै भन्छन्, ‘कांग्रेसका मतदाता सयमा अब ३० मात्रै बाँकी छन्’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र सशक्त युवा नेता मानिन्छन् गगन थापा। उनी पार्टीकै आलोचना गर्न पनि पछि पर्दैनन्। आइतबार प्रकाशित नेपाल साप्ताहिकमा बसन्त बस्नेतले कांग्रेस पार्टीका विषयमा नेता थापासँग कुराकानी गरेका छन्। त्यसको थोरै अंशः
पार्टी पुरानो हुँदैमा जनताले सधैं पत्याउँदैनन् भन्ने त युरोपतिरका पछिल्ला चुनावले पनि देखाइरहेका छन्। कांग्रेसको हकमा त्यस्तै नहोला भन्ने के छ?
पुरानो पार्टी भएर पनि कांग्रेसलाई सय मतदातामध्ये ३० जनाले मात्रै भोट हालिरहेको अवस्था छ। अर्थात्, ७० मतदाता त कांग्रेसइतर नै हुन्। हामीले यही ३० लाई जोगाउँदा मात्रै पनि चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था छ। सिंगो सरकार सत्ता निर्माण गरेर चुनावको त्यो निष्पक्षता नै गायब गर्ने बाटोतर्फ उद्यत भएका बेला झन् कति मिहिनेत गर्नुपर्ला !
याे पनि पढ्नुस काँग्रेसलाई एक ढिक्का हुन सभापति देउवाको आग्रह
३० लाई ५० हाराहारी पुर्याउँदा मात्र यो अनुदार सरकारलाई रोक्ने ताकत निर्माण हुन्छ। तर हामी अरू वैचारिक प्रस्टता त छाडौं, संविधानको स्वामित्व लिने सवालमै अलमलिएको देखिन्छौं।
कांग्रेस किन हार्यो भनी सोध्दा नेताहरू भन्छन्, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिले, त्यसैले हामी हार्यौं….
याे पनि पढ्नुस कांग्रेस नेता चक्र बास्तोलाको निधन
हामीले न्यूनतम लोकलाज पनि राखेनौं। जिम्मेवारी लिनबाट पन्छियौं। निर्वाचनको पराजयपछि व्यक्तिगत आक्षेपको एउटा चरण थियो। त्यसपछि हामी मूल उद्देश्यमा प्रवेश गरेका थियौं। अहिले त त्यसलाई पनि निस्तेज पार्यौं । अहिले पार्टीभित्र सुधारको कुरा गर्नै हुन्न। यत्रो जागरणको कुरो भइरहेको छ, बेला न कुबेला सुधारको कुरा गर्ने तिमीहरू भन्नुहुन्छ कतिपय नेता।
याे पनि पढ्नुस कांग्रेसमा समानुपातिक सांसद छनोटमा सकस, प्रयास जारी